YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, December 22
22 Dec 2010 ဒိုင်ယာရီ
22 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.doc
1966K View Download
22 Dec 2010 Yeyintnge's Diary.pdf
2570K View Download
Statement No-5-2010 of UFBAD.pdf
22 Dec 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/22/20100အကြံပြုခြင်း
Federalism and Leftist -Htun Aung Gyaw
45785337 Htun Aung Gyaw Federalism and Leftist
ရန်ကုန်သားတာတေ Wednesday, 22 December 2010 18:45 ထွေရာလေးပါး
ကြောင်မျိုးမင်း။ ။ ချီးထုပ်လေ ...။ မြို့တော်ဝန် အောင်သိန်းပျင်း အပေါက်ခံရတဲ့ ဟာပေါ့။
ရေသန့်ဘူး လာမှန်သဖြင့် အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားသော ဦးကြောင်မျိုးမင်းမှာ တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့်ကြည့်ရင်း “မိုးသီး ဇူလိုင်လာပြီ …..... အားလုံး … ဝပ်” ဟူ၍ အသံနက်ကြီးဖြင့် အော်လိုက်သောကြောင့် ထိုင်းတီးဝိုင်းမှ လင်းကွင်းတချပ် ပင်ကွဲသွားကြောင်း နောက်ဆုံးသတင်း ရရှိပါသည်။ ။
လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဇာတ်ရုပ် သရုပ်ပီအောင် ဆောင်နိုင်ပါစေ မီရှဲလ်.
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သော Tourism
by Ye Thurein Min on Wednesday, December 22, 2010 at 12:14pm
ရဲသူရိန်မင်း 21.12.2010 17:47
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုရစ်ဇင် အစဟာ သောမစ်ကွတ် (Thomas Cook) က ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေး မရခင် ကတည်းက စတင်ခဲ့တာပါ။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်တွင်တော့ မြန်မာ့တိုရစ်ဇင်ဟာ ပျောက်ကွယ်နေပြီး ၁၉၆၂တွင်မှ ဗမာ့စီးပွားရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းမှ
တိုးရစ်ဘားမားဟုခေါ်သော အေဂျင်စီ ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင်ကုန်သွယ်ကူးသန်း ကော်ပိုရေးရှင်း အမှတ် (၂၀)မှ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး Strand Hotel, President Hotel, Oriental Hotel နှင့် ထွန်းလှ Hotel တို့လည်း နိုင်ငံပိုင် အသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
၁၉၆၂ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တိုးရစ် ဗီဇာ ကို ၂၄ နာရီ မျှသာ ခွင့် ပြုခဲ့တယ် ၁၉၇၄ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးမှ တိုးရစ် ဗီဇာ( ၇ ) ရက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေ၀င်း လက်ထက်က တံခါးပိတ်ဝါဒ ကြောင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ပုဂံ၊ကလော နှင့် အင်းလေး
ဒေသတို့လောက်သာ လည်ပတ်ခွင့် ရခဲ့သည်။
၁၉၈၈ စစ်အာဏာ တခါထပ်သိမ်း၍ ဈေးကွက်စီးပွားရေး တံခါးဖွင့်မူကို ကျင့်သုံး ကာ နိုင်ငံတွင်းနဲ့ ပြင်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ၀င်ရောက်လာသောအခါ တိုရစ်ဇင် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပါသည် ။
၁၉၉၀ တွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဥပဒေကို အသစ်ပြဌာန်းပြီး တိုးရစ် ဗီဇာ ကိုလည်း (၁၄)ရက် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ မှာတော့ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်မည်ဟုဆိုကာ တိုးရစ် ဗီဇာ (၂၈)ရက်ထိထပ်တိုးပေးပြန်သည်။
တိုရစ်ဇင် မှ ရတဲ့ငွေဟာ ပြည်သူတွေလက်ထဲတိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့ငွေပါ။ ဆိုလိုတာက တိုးကုမ္မဏီတခုဟာ ခရီးစဉ်တခုကို အမြတ် ၂၀% နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုရင် ၁၀%သာ အစိုးရ အခွန်ဖြစ်ပီး ကျန်တာတွေကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဟိုတယ်၊ ဧည့်လမ်းညွန် နှင့်စားသောက်ဆိုင်တို့ကို ပေးရတာပါ။ ပီးတော့ တိုးရစ်တယောက်ဟာ လည်ပတ်ရင်း ဈေးဝယ်ရင်လည်း ပြည်သူ့လက်ထဲ တိုက်ရိုက် ရောက်တဲ့ငွေမျိုးပါ။တိုရစ်ဇင်ရဲ့ အတက်အကျ ပေါ်မှာ ခံစား စံစား နေရတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။
အံသြ စရာကောင်းတဲ့ ရွှေတိဂုံ၊ ကျီုက်ထီးရိုး
ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေပေါတဲ့ ပုဂံ၊ မြောက်ဦး၊မင်းကွန်း၊ပင်းတယ၊အင်းတိန်၊ကတ်ကူ
သဘာဝအလှနဲ့ ရိုးရာဓလေ့ တွေကြွယ်ဝတဲ့ အင်းလေး
ဘာသာတရားဆိုရင်လည်း ပဲခူး ကြခတ်ဝိုင်း စာသင်တိုက်၊ အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံ စာသင်တိုက်၊ မင်းကွန်း၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးက စာသင်တိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊ သီတင်းကျွတ်လို၊ သင်္ကြန်လို ပွဲတော်ကြီးတွေ
သဘာဝတောတောင်တွေကို လည်ပတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အီကို တိုရစ်ဇင် များ အတွက် ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် ။
တိုင်းရင်းသား ဓလေ့ထုံးစံတွေ ကြည့်မ၀ လေ့လာမကုန်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ကြီး ။ မြစ်ကြောင်းသွား ဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးတွေ သွားနိုင်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး၊
အပန်းဖြေစရာ ကမ်းခြေစခန်းတွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ ၂၀၀၀ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိသော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကြီး ။ နွေရာသီနားနေရာ ကလော၊မေမြို. ။ ဒီလို တိုရစ်ဇင် အတွက် အရင်းအမြစ်တွေ ကြွယ်ဝတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေးကြောင့် တိုးတက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပဲ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင် တနှစ်ကို တိုးရစ် ဆယ်သန်းလောက် ၀င်ရောက်လည်ပတ်နေရင် လို့တွေးမိတိုင်း အားမလိုအားမရဖြစ်မိပါတယ်။
တိုရစ်ဇင်ဟာ နိုင်ငံ တခုရဲ့စီးပွားရေးကို လုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲ နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ စပိန်နိုင်ငံ ရဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြပါမယ်။
စပိန်နိုင်ငံဟာ ၁၉၃၆ -၃၉ မှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွါးပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖရန်ကိုဟာ အာဏာသိမ်းပြီး ၁၉၄၉ မှာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုပါတီ လို့နာမည်ပြောင်းလဲ၍ သူသေတဲ့ ၁၉၇၅ နိုဝင်ဘာထိ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖူးတဲ့ စပိန်လူမျိုး သက်ကြီးပိုင်းတွေပြောတာက ယခုလက်ရှိ မြန်မာအနေအထားဟာ ဖရန်ကို လက်ထက် စပိန် နဲ့ အားလုံးအတူတူပဲလို့ပြောကြပါတယ်။ ဖရန်ကို သေတော့ ၁၉၇၇ မှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး ၁၉၇၈ မှာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအသစ်ကို ရေးဆွဲတော့ ၁၈၁၂ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ် ပုံအဟောင်းကို ပြုပြင်ရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေနဲ့ ဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်လာတဲ့ စပိန်ဟာ စီးပွါးရေးကို ၁၉၇၉ မှာ အစကနေ ပြန်စခဲ့ရပါတယ်။ Tourism ကို ဘက်စုံက ဖွင့်ဖြိုးအောင်လုပ်ပီးနိုင်ငံရဲ့ စိးပွါးရေးကို အဖတ်ဆယ်ခဲ့တယ်။
ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက စပိန်နိုင်ငံ Tourism နဲ့ဘယ်လို စီးပွါးရေးတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာပါ။
**နွေရာသီ နားနေခြင်းနှင့် ကမ်းခြေများ တိုရစ်ဇင်** - စပိန်ဟာ ပင်လယ်ပြင် ပတ်လည်ဝိုင်းနေသည်နှင့်အမျှ များပြားသော ကမ်းခြေများလဲရှိပါသည်။
**ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် နှင့် စီးပွါးရေး တိုရစ်ဇင်** - စပိန်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံအတော်များများကို သိမ်းပိုက်ကိုလိုနီ ပြုခဲ့သည်နှင့်အမျှ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် မြောက်များစွာနှင့်အတူ လေ့လာရန် နေရာ၄၂ခု ရှိပါတယ်။ တခါးဖွင့်စည်းပွါးရေးကြောင့်လည်း စိးပွါးရေး တိုရစ်ဇင်မှာလည်းဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။
**ဘာသာရေး တိုရစ်ဇင်** - ရှည်လျှားလှတဲ့ သမိုင်းအတွေ့အကြုံနဲ့ အတူ မျိုးစုံလှသော ဘာသာတရားများ ထွန်းကားမှုကြောင့် ဘာသာရေး အဆောက်အဦးများလည်း များစွာရှိပါတယ်။
**ပွဲတော်များ တိုရစ်ဇင်** - စပိန်နွားရိုင်းသတ်ပွဲ၊ နွားရိုင်းလွှတ်ပွဲကဲ့သို့သော နာမည်ကြီး ရိုးရာပွဲတောလာ တိုးရစ်များလည်း ရှိပါတယ်။
**ညဘ၀ တီုရစ်ဇင်** - မက်ဒရစ် နှင့် ဘာစီလိုနာ မြို.ကြီးများမှာ ကမ္ဘာ. စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ညအလှများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ မက်ဒရစ်မြို.ကတော့ ကမ္ဘာ.နံပါတ်တစ် ကလပ် ပါတီမြို.တော်အဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်။
**သဘာဝ နှင့် ကျေးလက် တီုရစ်ဇင်** - သဘာဝတောတောင် အလှများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော စပိန်မြောက်ပိုင်းဟာ တောင်တက်ခရီး ထွက်လိုသူများ သဘာဝ ရှု.မျော်ခင်းတွေ ကျေးလက်ရိုးရာတွေ ခံစားလိုသော တီုးရစ်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုရစ်ဇင်ဟာ စပိန်ရဲ့ အဓိက စီးပွါးရေးပါ။ တိုရစ်ဇင်က ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ကျန်တဲ့ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို လုပ်ခဲ့တာပါ။
တိုရစ်ဇင်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းမှာ စပိန်ဟာ ကမ္ဘာ.နံပါတ် ၉ နဲ့ ဥရောပ နံပါတ် ၅ စီးပွါးရေး အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ နိုင်ငံတိုင်းဟာလည်း တိုရစ်ဇင် ကို အထူးအလေးပေး လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ အောက်ပါစာရင်းကို ကြည်.မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်အားကျဖို့ ကောင်းသလဲ သိနိုင်မှာပါ။
မြန်မာ့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း လျှစ်လျှူ ရှု.မထားစေချင်ပါ။
မြန်မာပြည်တွင်လည်း တိုရစ်ဇင် ခပ်ဆန်းဆန်းတစ်ခုရှိသည်။မည်သည့်နိုင်ငံ
ကမျှမတီထွင်နိုင်သေးသော တိုရစ်ဇင်ဖြစ်သည်။အမည်မှာ JUNTA ECO TOURISM
ခေါ် စစ်အာဏာရှင် စီးပွားဖြစ် တိုရစ်ဇင် စနစ်ဖြစ်သည်။ရှင်းပါအံ့
၁။မြန်မာပြည်ရွှေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်တစ်ခအလို မည်သည့်သတင်းထောက်
မျှ မလာရ ၊လက်ရှိ နိုင်ငံခြားသားများ အ ထူးသဖြင့်ကနေဒါ နှင့်အမေရိကန်များ
အန်ဂျိအို အရာရှိကြီးများပါမကျန် သွား ထွက်သွားကြ မောင်းထုတ်လိုက်သည်။
၂။ရွှေးကောက်ပွဲ နှစ်ရက်အလို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးလိုင်းကြေးဟကြေးများ
ကစားသမားကြီးများယောင်ဆောင်ခြင်း အစ နည်းမျိုးစုံနှင့် သတင်းထောက်
များကို သိသိကြီနှင့် ဒေါ်လာသုံးထောင်ခန့်တင်ရိုက်သည့် JUNTA ECO TOURISM
ခေါ် စစ်အာဏာရှင် စီးပွားဖြစ် တိုရစ်ဇင်နည်းဖြင့်သွင်းလိုက်သည်။
၃။ရွှေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မှီ ဟိုတယ်ကြီများအခန်းပြည့်ကုန်သည် နအဖ နှာ
စေးနေသည်။သိသိနှင့်ဝါးထားလိုက်သည်။သူ့အမိန့် ဂလိုကိုး ဂလိုဂွင်ကြီးကိုး
၄။ဒေါ်စုလွှတ်သည့်နေ့ ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့တွင် ဘီဘီစီ WORLD SERVICE က
တစ်လခန့်ကြိုရောက်နေသည့် ကင်မရာကြိးများမီးကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးသူ
နအဖ အတွက် အလွန်သနားစရာကောင်းသည့်အကွက်ကြီးတစ်ကွက်ပင်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထုတ်သည့်အမိန့်တိုင်း စာလုံးတစ်လုံးချင်း တစ်ကြောင်းချင်း
ယုတ်စွအဆုံး လက်မှတ် အသားအတိုအရှည်တစ်ခုချင်းအလိုက် ဒေါ်လာကြေး
ခေါ်ပြီးရောင်းစားနိုင်သည် ယင်းတိုရစ်ဇင်စနစ်ကို အခြားနိုင်ငံများ လိုက်တုနိုင်
၁။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ၀င်ငွေမှာပြည်သူများထံသို့တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ခရီးသွားကုမ္ပဏီများမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် တရုံးရုံးလုပ်ပြီးပါမစ်တွေ ၊ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်တွေကို အရယူနေရသည်မှာ အားလုံးအသိဖြစ်ပါ သည်။ ပြည်သူတွေထံသို့ အရိုးအရ...င်းရောက်နေချိန်တွင် စစ်အစိုးရအလိုကျ သူဌေးကြီးများ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ အကျင့်ပျက်အစိုးရ၀န်ထမ်းများထံသို့ ဒေါ်လာငွေများ တရဟောစီးဆင်းနေပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရီးသွားများအတွက် ရေခံမြေခံကောင်းများရှိသော်လည်း ၄င်းရေခံမြေခံကောင်းများကိုအသုံးပြုပြီး ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ၀င်ငွေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လောက်သည့်အသိ လက်ရှိအစိုးရတွင်ရှိ ပါ၏လော။ အကြမ်းထည်ဆန်လွန်းသော အစိုးရအနေဖြင့် အနုထည်ဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေရအောင်လုပ်ရမည်ကို ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးဘဲ အရင်းအမြစ်များကို တနင့်တပိုးရောင်းချခြင်းဖြင့်သာအသက်ရှုချောင်ရန်ကြိုး စားနေပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်- ခရီးသွားများစိတ်ဝင်စားသည့်မြန်မာလူမျိုး စုများကို ထိုင်းနိုင်ငံက ၄င်းတို့ထံတွင်လက်ခံထားကာ ၇ွာတည်ပေးပြီးပြစားနေ သော်လည်း မြန်မာတို့မှာ ထိုအရာကို ကောင်းစွာမသိသေးပေ)
၃။ နိုင်ငံသားခရီးသည်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်ပတ်စရာများသော် လည်း ခရီးသည်များကို စွဲဆောင်နိုင်လောက်အောင်မလုပ်ထားနိုင်ခြင်း၊ အဖိုးတန် ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းကိုမကြည့်ဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်သလို ကိုယ်ပြင်ချင်သလို လုပ်နေခြင်း၊ နောက်ပြီး ခရီးသည်စိတ်ဝင်စားသောနေရာများကို ကောင်းမွန်စွာ မထိန်းသိန်းနိုင်ခြင်း၊ ခရီးသည်များအတွက် လုံခြုံမှုမပေးနိုင်ခြင်း၊ ဟိုမသွားရ ဒီမသွားရ ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုများခြင်း၊ လေယာဉ်၊ မီးရထားစသည်တို့ကိုပြေးဆွဲပေးရာတွင်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို မကြည့်ဘဲ ကိုယ့်သဘောအတိုင်း လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေခြင်း၊ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်တွင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခြင်း စသည့်စသည့် လုပ်ရပ်များကို ပြုပြင်နိုင်ရန် အရင်ဆုံး ကြိုးစားရမည်ဟုထင်ပါသည်။
Aung San Suu Kyi - GENERAL - Al Jazeera English
လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဇာတ်ရုပ် သရုပ်ပီအောင် ဆောင်နိုင...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် အနာဂတ်ကိုပြောင...
A dialogue with the recently released Burmese diss...